भरतपुरको मेयर कांग्रेसले पाउनुपर्छ, अन्य पालिकामा तालमेल हुन्छ : चितवन कांग्रेस सभापति « Harekpal
कुलप्रसाद काफ्ले April 4, 2022
बैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनबीच तालमेल गर्ने सहमति भएको छ । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) दुवैले आफ्नो दाबी गर्दै आएका छन् । जिल्लामा चुनावी तालमेल गर्ने विषयमा चितवन कांग्रेसका सभापति राजेश्वर खनालको संयोजनमा सोमबार पहिलो पटक गठबन्धनको बैठक बसेको छ । बैठकमा भएको छलफल र कांग्रेसको अडानको विषयमा खनालसँग कुलप्रसाद काफ्लेले गरेको कुराकानी ।
पहिलाको पर्म पनि तिर्नु प¥यो नि । १० हजार मत भएको माओवादीलाई ४० हजार मत भएको कांग्रेसले मत हालिदिएर । अझ त्यतिले पनि नपुगेर च्यातचुत पारेर जितेको होइन ? त्यसकारण यसपालि महानगरको मेयरको उमेदवार कांग्रेसबाट हुनुपर्छ भनेका छौँ ।
महानगरको मेयरको उमेदवार छान्ने त केन्द्रबाटै हो । जिल्लाको निर्णय विपरित केन्द्रबाट अर्काे निर्णय भयो भने त मान्नुपर्ने होला नि ?
२०७४ मा पार्टीगत गठबन्धन थिएन । हो, हामीले नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेनु दाहाललाई मतदान ग¥यौँ । तर त्यतिबेला संस्थागत गठबन्धन थिएन । व्यक्तिगत गठबन्धन थियो । माओवादीले हामीलाई कहाँ मत हाल्यो त ? वडामा हाम्रो आफ्नै खाले प्रतिस्पर्धा थियो । अन्य पालिकामा उहाँहरुसँगै हाम्रो प्रतिस्पर्धा थियो । कतिपय वडामा उहाँहरुसँग हामी हारेका पनि छौँ । त्यसकारण त्यतिबेला गठबन्धन थिएन केबल पुष्पकमल दाहालको छोरी भएको हुँदा नेपाली कांग्रेसले सत्ता समिकरणका बीचमा एकल सहयोग ग¥यौँ ।
निर्वाचनका बेला नेताहरुले जनतालाई असीमित सपना देखाउने र जितिसकेपछि न्युनतम कुराहरु पनि पुरा नगर्ने प्रवृत्ति छ । त्यसोभा हुनाले २०४८ मा हामिले जित्यौँ २०५१ मा हार्‍यौँ । २०५६ मा जित्यौँ २०६४ मा हार्‍यौँ । २०७० मा जित्यौँ २०७४ मा हा¥यौँ । अब २०७९ मा जित्ने पालो हाम्रो हो ।
–महानगरको मेयर कांग्रेसले नै पाउनुपर्छ भनेर अडान चाँहि किन लिनुभएको हो ?